Nzọụkwụ ise ị nwere ike ime taa iji kwalite ahịa ahịa Amazon gị | Martech Zone
Oge ịzụ ahịa na nso nso a bụ n'ezie ihe atụ. N'oge ọrịa na-efe efe mere eme, ndị na-azụ ahịa hapụrụ ụlọ ahịa brik na ngwa agha n'ìgwè, yana okporo ụzọ Black Friday. na-ada karịa 50% afọ gafere afọ. N'ụzọ dị iche, ịre ahịa n'ịntanetị rịrị elu, ọkachasị maka Amazon. N'afọ 2020, online ibu kọrọ na ndị na-ere ahịa nọọrọ onwe ha n'elu ikpo okwu ebugharịla $ 4.8 nde ngwa ahịa na Black Friday na Cyber ​​​​Monday - gbagoro 60% karịa afọ gara aga.
Ọbụlagodi ka ndụ na-alọghachi ka ọ dị na United States, ọ nweghị ihe gosiri na ndị na-azụ ahịa ga-alaghachi azụ n'ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa naanị maka ahụmịhe ahụ. O yikarịrị ka omume ndị ahịa agbanweela kpamkpam, ha ga-atụgharịkwa na Amazon ọzọ maka ọtụtụ ịzụ ahịa ha. Ka ndị na-ere ahịa n'ebe niile na-amalite ịhazi atụmatụ nke afọ a, ikpo okwu a ga-abụrịrị nnukwu ọrụ.
Ire na Amazon dị oke egwu
N'afọ gara aga, ihe karịrị ọkara nke ahịa e-commerce niile gafere Amazon.
PYMNTS, Amazon na Walmart fọrọ nke nta ka ejikọta ọnụ na oke ahịa azụmaahịa nke afọ zuru oke.
Ọchịchị ahịa ahụ pụtara na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ga-enwerịrị ọnụnọ n'elu ikpo okwu iji nwetaghachi ụfọdụ okporo ụzọ (na ego ha nwetara) nke ha ga-atụfu ma ọ bụghị ya. Otú ọ dị, ire ere na Amazon na-abịa na ụgwọ na isi ọwụwa pụrụ iche, na-egbochi ọtụtụ ndị na-ere ahịa ịhụ nsonaazụ ha chọrọ. Ndị ọchụnta ego kwesịrị imecha atụmatụ egwuregwu ha nke ọma tupu oge eruo ịsọ mpi n'ahịa Amazon. Ọ dabara nke ọma, enwere usoro ị ga - eme taa nke ga - eme ka ahịa Amazon gị dịkwuo elu:
Nzọụkwụ 1: Melite ọnụnọ gị
Ebe mara mma ịmalite ọrụ a bụ ikwe ka ngwaahịa gị na-enwu. Ọ bụrụ na i mebebeghị ụlọ ahịa Amazon gị, nke a bụ nzọụkwụ mbụ dị oke mkpa. Ụlọ ahịa Amazon gị bụ obere ebe nrụọrụ weebụ dị n'ime gburugburu ebe obibi sara mbara nke Amazon ebe ị nwere ike igosipụta ahịrị ngwaahịa gị niile wee nweta ohere ire ere na iweghachite ndị ọrụ na-achọpụta akara gị. Site na ịmepụta saịtị Amazon gị, ị ga-adịkwa njikere iji ngwaahịa na njirimara ọhụrụ eme ihe ka ha na-apụta.
N'otu oge ahụ, ị ​​kwesịrị ilekwasị anya na imelite ma ọ bụ mejuputa ọdịnaya A + maka ndepụta Amazon gị niile, nke bụ ihe oyiyi dị arọ na ibe nkọwa ngwaahịa. Ngwaahịa gị ga-adọrọ mmasị na ọdịnaya A+ dị na ya ma nwee mmetụta nke ika na-agbanwe agbanwe. Ị ga-ahụkwa mmụba na ọnụego ntọghata nke na-eme mgbalị mgbakwunye ahụ kwesịrị oge gị.
Nzọụkwụ 2: Mee ka ngwaahịa gị bụrụ nke a na-ere ahịa
Mgbe ị na-eme ka ngwaahịa gị mara mma bụ ihe dị mkpa n'ezie, ị ga-achọkwa ijide n'aka na ngwaahịa gị dị mma maka ndị ọrụ Amazon. Iji mee nke a, lee anya nke abụọ ka i siri chịkọta ngwaahịa gị.
Ụfọdụ ndị na-ere Amazon na-ahọrọ ịdepụta ngwaahịa nwere njirimara dị iche iche (kwuo agba ma ọ bụ nha) dị ka ngwaahịa n'otu n'otu. Ya mere, obere obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ị na-ere ga-abụ ngwaahịa ọzọ karịa otu tank ahụ na nnukwu nha ma ọ bụ agba uhie. Enwere uru na ụzọ a, mana ọ bụghị ezigbo enyi na enyi. Kama, gbalịa na-eji njirimara mmekọrịta nne na nna na nwa iji chịkọta ngwaahịa ọnụ, ka enwere ike ịchọta ha. N'ụzọ ahụ, mgbe onye ọrụ chọpụtara n'elu tank gị, ha nwere ike gbanwee n'etiti agba na nha dị n'otu ibe ahụ ruo mgbe ha chọtara kpọmkwem ihe ha chọrọ.
Ị nwekwara ike nyochaa ndepụta ngwaahịa gị iji kwalite ka ha ga-esi pụta na nsonaazụ ọchụchọ. Amazon agaghị egosi ngwaahịa ọ gwụla ma o gosipụtara okwu ọchụchọ niile ebe na ndepụta ngwaahịa. N'iburu nke ahụ n'uche, ị kwesịrị ịgụnye ihe niile ị maara gbasara ngwaahịa gị na njirimara ha, yana okwu ọchụchọ ndị dị mkpa, iji kwalite aha ngwaahịa gị, mkpụrụ okwu azụ azụ, nkọwa na ihe mgbo. N'ụzọ ahụ, ngwaahịa gị ga-enwe ike ịpụta na nchọta. Nke a bụ ndụmọdụ onye nyocha: ka ndị mmadụ si achọ ngwaahịa gị na-agbanwe dabere na oge. Yabụ, jide n'aka na imelite ndepụta gị ka ị nweta ohere nke usoro oge.
Kwụpụ 3: Malite ịnwale Ngwa Mgbasa Ozi Ọhụrụ
Ozugbo ịmechara ngwaahịa gị, malite ịnwale ngwaahịa na njirimara mgbasa ozi ọhụrụ iji tinye ha n'ihu ndị na-azụ ahịa dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ugbu a iji mgbasa ozi ngosi akwadoro iji gbado ndị na-ege ntị dabere na data ịzụrụ ha. Mgbasa ozi ndị a na-egosi na ibe nkọwa ngwaahịa ka ị nwee ike ịsọ mpi ozugbo na ngwaahịa ndị yiri ya, ha nwekwara ike ịpụta na ibe ụlọ Amazon. Nnukwu ego maka mgbasa ozi ndị a bụ na a na-egosipụta ha na Amazon Display Network, nke bụ mgbasa ozi na-eso ndị ọrụ na ịntanetị.
Amazon ewepụtakwara mgbasa ozi vidiyo ika akwadoro n'oge na-adịbeghị anya. Otu mgbasa ozi ọhụrụ a na-atọ ụtọ karịsịa n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ Amazon ahụtụbeghị vidiyo gbapụta mbụ, na-eme ka ha na-adọrọ adọrọ nke ukwuu. Ha na-enyekwa ntinye akwụkwọ mbụ, nke dị oke mkpa mgbe ị na-atụle nke ahụ Pasent 40 nke ndị na-azụ ahịa anaghị agba ọsọ gafere ibe mbụ ha na-emeghe. Ugbu a, mmadụ ole na ole na-eji mgbasa ozi ndị a, yabụ ọnụ ahịa-otu-pịa dị ala.
Nzọụkwụ 4: Dezie na nkwalite gị nke oge
Nkwalite ziri ezi nwere ike ịbụ ihe dị iche na ịtụgharị okporo ụzọ mgbasa ozi ka ọ bụrụ ntụgharị. Ọ bụrụ na ị na-aga na-enye nkwalite, ọ dị oké mkpa ka igbachi ndị nkọwa n'oge n'ihi na Amazon chọrọ n'ihu ọkwa ka ịtọ ha na oge ... karịsịa maka Black Friday na Cyber ​​5. Nkwalite bụ ihe aghụghọ na agaghị arụ ọrụ maka ọ bụla. azụmahịa ma ọ bụ ngwaahịa. Agbanyeghị, otu atụmatụ nkwalite Amazon dị irè bụ imepụta ngwugwu mebere nke jikọtara ngwaahịa ndị metụtara ọnụ. Ọbụghị naanị na atụmatụ a na-enyere aka ịre ahịa na ire ihe ndị yiri ya, mana ị nwekwara ike iji ya kwalite visibiliti maka ngwaahịa ọhụrụ na-adabaghị n'ọkwa nke ọma.
Kwụpụ 5: Nyochaa Akwụkwọ Ozi Amazon
Nzọụkwụ ikpeazụ ị nwere ike ime ka ịwụ elu na ahịa Amazon bụ ịmepụta gị Ozi Amazon ọnụnọ. Ụlọ ọrụ ahụ na-achọkarị ụzọ ọhụrụ iji mee ka ndị ọrụ na saịtị ahụ ogologo oge, ya mere ọ malitere ịnwale n'akụkụ ọha na eze ịzụ ahịa. Ụdị na-ewulite ibe wee bipụta ọtụtụ ihe dịka ha ga-eme na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ. Ndị ọrụ nwekwara ike soro ụdị ọkacha mmasị ha.
Ihe na-eme ka Amazon Posts bụrụ ihe na-atọ ụtọ bụ na ha na-egosi na ibe nkọwa ngwaahịa na ibe ngwaahịa asọmpi. Ọhụụ a na-eme ka ha bụrụ nnukwu ngwaọrụ iji nweta mkpughe ọzọ maka ika na ngwaahịa gị. N'ime ọnwa ndị na-ebute nkwalite gị, nwalee onyonyo na ozi dị iche iche ka ịhụ ihe na-adagharị. Ị nwere ike ịmalite usoro a ngwa ngwa na nke ọma site n'ịmegharị posts ị na-eji na Instagram na Facebook.
Na-eme nke ọma na Amazon
Olileanya na anyị niile ga-anụ ụtọ afọ a pụọ ​​na nchekasị na ejighị n'aka anyị nwetara n'afọ gara aga. Otú ọ dị, n'agbanyeghị ihe merenụ, anyị maara na ndị na-azụ ahịa ga-abawanye na Amazon maka mkpa ịzụ ahịa ha. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tinye ikpo okwu a n'ihu na etiti ka ị na-amalite ịmepụta atụmatụ nkwalite gị. Site n'ịrụ ọrụ ụfọdụ atụmatụ ugbu a, ị ga-anọ n'ebe dị mma ịhụ oge kacha aga nke ọma na Amazon.
Tags: amazon mgbasa ozimgbasa ozi amazonamazon postAmazon nkwaliteamazon ahịabulie ahịa ahịa SEOcyber mondaye-azụmahịapymnts